Netatmo ihu igwe, nyocha na uche | Gam akporosis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Noticias, Nyocha
Ahụrụ m ụwa nke ngwa ngwa ụlọ n'anya. Eluigwe na-enweghị atụ nke na-abịaru nso na nso nso maka ndị nrụpụta na-agba mbọ inye azịza zuru oke na ọnụahịa ga-eru ọtụtụ ndị ọrụ. Ihe omuma atu doro anya bu Netatmo.
Anyi agwala gi banyere ya ike Netatmo Nnabata igwefoto, a na ngwaọrụ na-enye ohere ka anyị nyochaa ọ bụla ije si anyị gam akporo ama ma ọ bụ mbadamba ekele ya zuru ezu ngwa. Ugbu a anyị ewetara gị a Netatmo nyocha ihu igwe, ngwaọrụ zuru oke nke juru ya anya maka ịdị nfe ya mgbe ị wụnye ma jiri ya ebe ọ bụ na ị ga-ejikwa sistemụ niile na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị.
1 Netatmo ihu igwe ọdụ na-anọchi anya maka atụmatụ ya mara mma na ịdị mfe nke iji ya
2 Mị ọdụ ọdụ ọdụ Netatmo
3 Nke a bụ otú ụlọ ọrụ ihu igwe Netatmo si arụ ọrụ
4 Netatmo na-enyere anyị aka ilekọta ụlọ anyị
Netatmo ihu igwe ọdụ na-anọchi anya maka atụmatụ ya mara mma na ịdị mfe nke iji ya
Maka nyocha nke ngwaahịa a, site na Netatmo enyela m ngwongwo zuru ezu nke mejupụtara n'otu aka ọdụ ọdụ ihu igwe Netatmo na n'aka nke ọzọ ihe nlele mmiri ozuzo na anemometa, na nkenke ngwugwu zuru ezu iji nyochaa data ihu igwe ọ bụla.
Mmetụta mbụ mgbe ị na-emepe ngwaahịa a bụ na onye nrụpụta lekọtara nkọwa ikpeazụ ọ bụla; ma mmiri ozuzo nlele na anemometer nwere usoro dị iche iche iji jigide akụkụ ndị a Iji maa atụ, ejirila m sistemụ flange ahụ mara mma mee ihe ịnagide ngwa abụọ na-enweghị igwu ala mgbidi. Mfe ma dị mfe.
Netatmo Anemometer na Rain Gauge bụ ngwaọrụ abụọ dị fechaa, mee nke polycarbonate dị elu nakwa na ha na-enye oke mmetụta nke ike mgbe ejide ha. Ewezuga ntọala etiti, nke m ga-ekwu maka mgbe e mesịrị, ngwaọrụ niile gburugburu Netatmo ihu igwe ọdụ na-arụ ọrụ na batrị na m ga-ekwu na usoro dị omimi iji tinye batrị ma maka mpụga mpaghara na nyocha mmiri na anemometer dị ezigbo mma ma dị irè.
Na mgbakwunye, ma ime ụlọ na ime ụlọ nke ọdụ ọdụ ihu igwe Netatmo Ha nwere ezigbo ego. Ya cylindrical udi mejupụtara anodized aluminum ahụ, àjà a nnọọ adịchaghị anya ka ma ngwaọrụ. N'ihi ọdịdị a mara mma na nke oge a, anyị nwere ike idowe ụlọ dị n'ime ụlọ ebe ọ bụla n'ime ụlọ na-enweghị nsogbu.
N'ihe banyere n'èzí unit na, dika i huworo, dị obere karịa, na nke a ọdịdị dị obere dị mkpa ọ bụ ezie na ọ ka dị mma. Ahụrụ m ya n'anya gụnyere usoro anchoring, dị mfe iji wụnye ma sie ike, yana usoro ịtinye batrị.
Dị ka ngwaọrụ ndị a anaghị eji ụdị ngosi ọ bụla, maka nke ahụ anyị nwere ngwa Netatmo zuru ezu. Ebe ọ bụ na enweghị panel, enwere m ụjọ na amaghị m ma m tinyela batrị ahụ nke ọma mana ndị otu Netatmo chepụtara ihe niile ma tinyela obere ọkụ ndị dị n'èzí, akara mmiri ozuzo na anemometa nke ga-egosi na ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Na mgbakwunye isi unit nwere nnukwu Ikanam na-agba ọsọ tinyere ya dum n'ihu ma na-enwu ọkụ mgbe ejikọtara ya ma dịgasị iche na agba ya dabere na ọkwa nke CO2 n'ụlọ ahụ. Nnọọ uru na yi. Na nke a, enweghị m ike ịkatọ ihe ọ bụla ebe ọ bụ na nhazi nke nkeji niile nke ọdụ Netatmo ihu igwe dị m mma, yana nkwakọ ngwaahịa zuru oke na usoro nke ngwa ndị na-akwado ọrụ ahụ mgbe ị wụnye ngwaọrụ Netatmo dị iche iche. Nkwubi okwu m na nke a bụ na onye nrụpụta na-enye ngwaahịa dị mma, nwee ezigbo mma yana na nkwakọ ngwaahịa zuru oke nke na-eme ka nrụnye nke ihe dị iche iche dị n'ụlọ gị rụọ ọrụ nke ukwuu.
Mị ọdụ ọdụ ọdụ Netatmo
Netatmo ahọrọla a Nkwụnye na Play usoro nke ahụ na-enye ohere ịnweta ngwaọrụ niile na-arụ ọrụ n'otu ntabi anya. Ma ọ bụ na usoro iji rụọ ọrụ ọdụ ụgbọelu dum nke onye nrụpụta ahụ dị mfe, dịkwa na igbe nke ihe ọ bụla mejupụtara, na-abịa nchịkọta nke usoro ị ga-agbaso.
Iji mee nke a, ihe mbụ anyị ga-eme bụ ime ka isi ụlọ ọrụ, nke bụ ngwaọrụ cylindrical kachasị. Gbaso usoro ndị na-abịa na akwụkwọ ntuziaka na nke nchịkọta gụnyere ijikọ ụlọ dị n'ime ụlọ na ntanetị site na njikọ micro USB ya, mekọrịta na ngwa Netatmo arụnyere na ama anyị ma ọ bụ mbadamba ma jikọta netwọk Wi-Fi, anyị ga-arụ ọrụ ahụ rụọ ọrụ.
Ugbu a, naanị anyị ga - emekọrịta ya na mpaghara dị n'èzí ma anyị nwere ngwaọrụ abụọ ejikọtara yana na ikike zuru oke. Na ngalaba a enwebeghị m nsogbu ọ bụla mgbe m na-eji netwọ Wi-Fi m mana na igwefoto Nnabata enwere m nsogbu ma m ga-edozi aka ahụ, mana echegbula, ọ naghị esiri ike. Na mgbakwunye, Netatmo nwere email ịkpọtụrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ nkwado ụdị ọ bụla.
N'ikpeazụ, ihe niile ị ga - eme bụ rụọ ọrụ nlele mmiri na anemometer, na nke a, a na-eme ya site na ngwa etinyere na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba, na-eme ka ngwa abụọ ahụ rụọ ọrụ na nkeji ole na ole. Ekwesịrị itinye ngwaọrụ niile iji nweta ozi ihu igwe dị nso n’obodo anyị.
N'okwu m, inwe a nọ n'ọrụ Netatmo akaụntụEkwesighi m ịdebanye aha, mana ọ bụrụ na ị bụ ndị ọrụ ọhụụ cheta na ị ga-enwe profaịlụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nrụpụta iji nwee ike iji ngwa ha ma nweta mpaghara niile nke ọdụ ihu igwe gị na kọmputa ọ bụla.
Ekwesiri ighota na anyi nwekwara ike tinye ihe ato n'ime ozo iji chịkwaa, dika imaatu ma obu CO2 di n'ime ulo umuaka anyi.
Nke a bụ otú ụlọ ọrụ ihu igwe Netatmo si arụ ọrụ
Ozugbo anyị chịkọtara ihe niile, oge eruola ka anyị hụ ka esi arụ ọrụ. Ugbua agwala m gị nke ahụ Netatmo ihu igwe ọdụ na-arụ ọrụ nke ọma. Iji malite, ngwa na web nwere interface dị omimi nke anyị ga-eji na obere oge. N'ezie, ọ bụ ezie na ihe niile dị mfe, ọdụ Netatmo ihu igwe na-enye ọtụtụ ozi.
Isi peeji nke ngwa a bụ ebe anyị ga-enweta ozi ndị bụ isi. N'ụzọ dị otú a, na akụkụ ala anyị nwere ike ịhụ nkezi okpomọkụ n'ụlọ anyị, na mgbakwunye na kachasị na opekempe, ọkwa nke iru mmiri, mkpọtụ na ọbụlagodi CO2, imelite ozi ọ bụla 5 nkeji.
Apụghị ikweta eziokwu? Ọfọn a ka nwere ebe ọ bụ na Mgbe ọkwa Co2 dị elu karịa 1000 ppm, ọdụ ahụ ga-ezitere anyị ọkwa na LED ya ga-acha odo odo. Nkọwapụta nke m nwere ekele kemgbe, anyị nwekwara ike hazie ka ụdị ọkwa ndị a wee rute anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ. Na mgbakwunye, site na ịpị na ime ụlọ, ebe ọ bụ na elu ahụ dị mma, ọdụ ahụ ga-ezigara anyị nchịkọta nke ọnọdụ dị ugbu a ma n'ime ma n'èzí ụlọ.
Ma ọ bụ na akụkụ dị elu nke isi taabụ nke ngwa ahụ bụ ebe anyị ga-enwe ọtụtụ data site na mpụga, dịka oke na oke okpomọkụ, ọnọdụ dị ugbu a, mmetụta ọkụ, ogo iru mmiri, nrụgide, ohere mmiri ozuzo. .. Na-adịghị agwụ agwụ nhọrọ na ha ga-obi ụtọ ọ bụla onye ọrụ ebe ọ bụ na ihe ọmụma niile na-kọwara na a nnọọ mfe ma dị mfe jikwaa ụzọ. Ma o doro anya Anyị nwere ike ịhụ amụma maka ụbọchị asaa na-abịa.
N'ikpeazụ, ekwesịrị ịmara na Netatmo nwere nnukwu netwọkụ, Netatmo Weather Map, nke mejupụtara ọtụtụ puku ọdụ ụgbọ elu nke ihu igwe na nke a na-eji enweta data oge site na mpaghara ọ bụla. Agwala m agwa gị na maapụ ahụ dị nnukwu. Ọ dị mma, buru oke ibu ka ị nweta nkọwapụta njirimara zuru ụwa ọnụ zuru ụwa ọnụ.
Netatmo na-enyere anyị aka ilekọta ụlọ anyị
Offọdụ n'ime unu nwere ike ịnọ na-eche: ọ dị mma, ọdụ ọdụ igwe Netatmo zuru ezu n'ezie, mana kedu ihe ihe a niile metụtara ụlọ na akpaaka? Ọfọn, na-amalite ike ịchịkwa ndị a niile parameters si na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba bụ ama a nnukwu nzọụkwụ. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a na ngwugwu niile na-enye oke ozi nke na-enye anyị ohere ịhazi ihe dịka oge ahụ si agwa anyị, dị ka ịmara na anyị ga-egbutu mmiri nke ubi ahụ ebe ọ bụ na mmiri ga-ezo ma ọ bụ meghee windo ka ventilet Thelọ ahụ, ọ bụrụ na enwere nnukwu ọkwa nke Co2, na-egosi ọtụtụ ohere ndị ụlọ ọrụ a na-adọrọ mmasị na-enye.
Ekwesiri ighota na ọdụ Netatmo ihu igwe, dị ka akara ngwaahịa ya niile, nwere ike jikọta ya na ọrụ IFTTT nke ga-enye anyị ohere ịmepụta usoro ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ omume mgbe otu ihe mere: Gịnị bụ gburugburu ebe obibi gị n'okpuru ogo ụfọdụ. ? Ọfọn, kpo oku ga-arụ ọrụ na-akpaghị aka. Ma ọ bụ ị ga-enweta ihe ncheta iji gbanyụọ usoro mmiri ebe ọ bụ na ọ dị ka echi ọ ga-ezo.
M na na-anwale ngalaba niile maka ihe karịrị otu ọnwa na eziokwu bụ na mmetụta ahụ dị ezigbo mma. Enwetụbeghị m mmasị na ụwa nke ihu igwe mana mgbe m nyochachara ọtụtụ mpaghara, na-achịkwa ụkpụrụ dịka ọnọdụ okpomọkụ n'ụlọ ma ọ bụ, gịnị kpatara m ji jụ ya, laa azụ gwa ndị enyi m gbasara etu ụlọ m siri gosipụta nke ọma. Co2 larịị, m ga-ekwu na ọ baara m ezigbo uru.
Na-atụle na Netatmo ihu igwe, gụnyere ime ụlọ na n'èzí, cỌ na-efu ugbu a euro 145 na Amazon, na mgbakwunye na Euro 99,79 maka anemometa y 65.94 maka nlele mmiri ozuzo, O yiri m ezigbo ego ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ohere nke Netatmo ọhụrụ ahụ.
Netatmo Weather Station foto Osisi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Netatmo ihu igwe, nyocha na uche
Blackberry na-akwado ọnụnọ nke anụ ahụ nkịtị maka njedebe dị nso
Foto ndị a na-egosi anyị ihe anyị Agbaghara na Project Ara